सडकमै स्टेज : ‘बस्किङ’ (भिडियोसहित) - नेपाल समय
सडकमै स्टेज : ‘बस्किङ’ (भिडियोसहित)
साँझ ६ बजे, बानेश्वरको व्यस्त सडक, मानिसको भीडभाड। दिनभरको कामले थकानमा रहेर निवासतर्फ दोडिरहेका हजारौं मानिस। त्यही भीडमा १८ वर्षका सुलभ मिश्र संगीतमय वातावरण बनाइरहेका थिए। सुलभले अगाडि गितार ब्याग ओछ्याएका छन्। सँगै, ‘निड हेल्प फर माई स्टडी’ लेखिएको पम्प्लेट छ। नजिकै गएर एक महिला सोधिन्– के हो तिम्रो नाम ? ‘सुलभ मिश्र।’ कति क्लासमा पढ्छौ ? ‘१२ मा।’
‘ओके, गुड जब’ भन्दै भुइँमा फैलाएको गितार ब्यागमा ५० रुपैयाँ राखेर ती महिला गन्तव्यमा लागिन्। उनलाई कोही बिचरा भन्दै सहयोग गर्छन् भने कोही उनको गायकीको कदर गर्दै सहयोग गर्छन्। कोही उनको आँट र साहसलाई हौसला दिँदै सहयोग गर्छन्। ‘जे होस् साथ पाइरहेको छु’, सुलभ भन्छन्।
न्यु समिट कलेजमा १२ मा अध्ययनरत सुलभका अभिभावक भने भारतको मणिपुरमा छन्। बाल्यकालमा चितवनस्थित फुपूको घरमा बसेको उनी अहिले काठमाडौंमा बस्दै आएका छन्।
करिब तीन महिनाअघि सुलभ मिश्र पशुपतिनाथमा पुगे। हातमा गितार र मनमा केही संकोच, केही लाज, केही द्विविधा र केही आँटका साथ उनी पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको एउटा पार्कमा उभिए। ब्यागबाट गितार निकालेर बजाउन थाले। एक व्यक्तिले सोखका लागि मात्र गीत गाएको कि केही रकम कमाउनका लागि भनेर जिज्ञासा राखे। सुलभले सबै कुरा बताए। त्यसपछि सुलभलाई ५० रुपैयाँ दिएर हिँडे। ‘मेरो पहिलो कमाइ त्यही नै थियो’, सुलभले भने।
‘बस्किङ’ अर्थात् सडकमा कला देखाएर रकम संकलन गर्ने काम। सडकमा देखाइने जादु, नाटक, नाच, चटकजस्ता क्रियाकलापलाई बस्किङ भनिन्छ। ‘बस्किङ सामाजिक सहयोग र मेरो व्यक्तिगत आम्दानीका लागि मात्र नभई एक अभियान पनि हो’, सुलभले भने। विदेशमा सडकमा गितार बजाउनु सामान्य मानिन्छ। उनी भन्छन्, ‘म बस्किङलाई नेपालमा स्थापित गर्न चाहन्छु। भ्यालेनटाइन डे, फेसन, क्रिसमस, न्यु एयर इभ जस्ता विदेशी संस्कृति मनाउन मिल्छ भने बस्किङ किन मिल्दैन ?’
उनी सडक नै आफ्नो स्टेज भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘मेरा लागि सडक नै स्टेज हो। कुनै रियालिटी सो मेरो लक्ष्य होइन।’ सुलभ अमेरिकी गायक एड सेरेनका फ्यान हुन्। उनी सेरेनको हातमा गितार र गितार ब्याग अगाडि केही नगदसहितको तस्बिरले सुलभको मन आकर्षित भयो।
उनले एक वर्षअघि माघ १० गते भक्तपुर दरबार स्क्वायरबाट बस्किङ सुरु गरेका हुन्। उनले भने, ‘मैले सामाजिक कार्यको लागि बस्किङ सुरु गरेको हुँ।’ त्यहाँ प्रहरीले गाउन, बजाउन नमिल्ने बताएपछि उनी वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा पुगे। त्यहाँ पनि उनलाई प्रहरीले अनुमति दिएन। उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले स्वयम्भूमा सुरु गर्‍यौँ। त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै रोकावट आएको छैन।’ अहिले उनले स्ट्रिट म्युजिक नेपाल नामक संस्था दर्ता गराएका छन्।
उनी पछिल्लो तीन महिना भने आफ्नै लागि काम गरिरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘अरूका लागि नौ महिनादेखि काम गर्दै आएको छु।’ कलेजको शुल्क र आफ्नो लागि लाग्ने खर्च नभएपछि व्यक्तिगत रूपमा बस्किङ गर्ने थालेको सुलभले प्रस्ट पारे।
एक वर्षको अन्तरालमा सुलभले पाएको ख्याति लोभलाग्दो छ। पत्रिका र युट्युबका लागि अन्तर्वार्ता दिन उनलाई म्याइनभ्याइ छ। सुलभले कमाएको ख्यातिसँगै उनका सकस पनि उत्तिकै छ। एकपटक सुलभलाई रेस्टुराँमा गीत गाउन अफर आयो। ४–५ घन्टासम्म उनले मनोरञ्जना दिए। तर उनलाई रेस्टुराँका मालिकले स्टोर रूममा लगेर खाना खान दिए। उनले भने, ‘पारिश्रमिक पनि चार सयमात्र पाएँ। त्यो अनुभव जीवनमा निकै तितो भयो।’
पढाइमा तेज रहेका सुलभ ११ कक्षामा ‘सेक्सन टपर’ थिए। तर, उनी अहिले टपरभन्दा पनि पास हुन्छन्। निरन्तर ३–४ घन्टा गाउँदा र गितार बजाउँदा घाँटी र हात दुख्छ। त्यस्तै, काठमाडौँको धुवाँ–धुलो, रूघाखोकी, टाउको दुखाइ त सामान्य हुन थालेको छ उनलाई। रूम पुग्दा थकित हुन्छु तर पनि हरेस खाएको छैन। स्वास्थ्यको पनि केयर गरिरहेको छु।
प्रहरीसँग डर लाग्छ
हुन त प्रहरीले उनलाई त्यस्तो केही अवरोध गरेको छैन। पशुपति क्षेत्र, भक्तपुर र वसन्तपुरमा उनलाई प्रहरीले उहाँ किन गरेको, यहाँ गर्ने पाइँदैन जस्ता कुरा भने पछि उनी हच्किए। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई केही गरेको त छैन। तर प्रहरी देख्दा डर लाग्छ उनलाई।
गैससमार्फत सहयोग संकलन
सुलभले स्ट्रिट म्युजिक नेपाल नामक एक संस्था दर्ता गरेका छन्। उनको संस्था प्रत्येक शनिबार काठमाडौंको स्वयम्भूमा ‘बस्किङ’ मार्फत सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुँदै आएको छ। जनक गन्धर्व र चितवनमा तेलमा डुबाइएकी एक बालिकाका लागि उनीहरूले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘कलालाई सम्मान गरेर हो वा मेरो दयाले हो धेरै मानिसले सहयोग गर्नुहुन्छ।’
एक दिनमा उनी १० हजारसम्म संकलन हुने बताउँछन्। यसरी संकलित रकम व्यक्तिगत प्रयोगका लागि भन्दा सामाजिक अभियानमा खर्च गर्ने योजना उनको छ। उनका अनुसार ‘बस्किङ’ भनेको भिक्षा माग्नु होइन। उनले भने, ‘यो एउटा अभियान हो। समाज परिवर्तनका यसबाट योगदान दिन सकिन्छ।’